တန်ဖိုးထားတတ်​​​​စေချင်​သည်​.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တန်ဖိုးထားတတ်​​​​စေချင်​သည်​..
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Aug 4, 2014 in Creative Writing, Education, How To.. | 45 comments
ယခု​ခေတ်​သည်​ ပညာ​ခေတ်​ဖြစ်​သည်​။ ပညာ​ခေတ်​တွင်​ ပညာကို အသည်းအသန်​သင်​ယူကြသည်​။ ထိုသို့ သင်​ယူရာတွင်​ အင်္ဂလိပ်​စာသည်​ အဓိကကျ​သော အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်​​နေ၏။​ အထက်​တန်းသင်​ရိုးများကိုပင်​ (မြန်​မာစာက လွဲ၍) အင်္ဂလိပ်​ဘာသာနှင့်​ ပြဌာန်းထားသဖြင့်​ အင်္ဂလိပ်​စာ မတတ်​လျှင်​ ဘာသာရပ်​များကို ​လေ့လာရာ၌ အခက်​အခဲဖြစ်​​စေသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ က​လေးငယ်​များကအစပင်​ အင်္ဂလိပ်​စာကို အထူးအ​လေး​ပေး သင်​ယူ​နေကြ​ပေသည်​။
ထို့အပြင်​ လွတ်​လပ်​ပွင့်​လင်းစပြုလာ​သော မြန်​မာနိုင်​ငံသို့ ပြည်​ပမှ လာ​ရောက်​ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှုများလည်း ​စတင်​ဝင်​​ရောက်​နေပြီ ဖြစ်​သကဲ့သို့ ပြည်​တွင်းမှ နိုင်​ငံသားအများအပြားကလည်း ပြည်​ပလုပ်​ငန်းခွင်​များသို့ သွား​ရောက်​လုပ်​ကိုင်​ကြသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာနှင့်​ ဆက်​သွယ်​ရာတွင်​လည်း နိုင်​ငံတကာသုံးဘာသာစကားဖြစ်​သည့်​ အင်္ဂလိပ်​စာသည်​ အ​ရေးအကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်​​နေပြန်​၏။
သို့ဖြစ်​၍ လူကြီးလူငယ်​ အရွယ်​မ​ရွေး အင်္ဂလိပ်​စာကို သင်​ယူကြသည်​။ ​လေ့လာကြသည်​။ ​ပြောဆိုကြသည်​။ ​လေ့ကျင့်​ကြသည်​။ ​ကြိုဆိုပါ၏။ အကျိုးရှိသည့်​အလုပ်​ကို လုပ်​ခြင်းသည်​ကား မင်္ဂလာတစ်​ပါး​ပေတည်း။
သို့​သော်​ တန်​​ဆေးလွန်​​ဘေးဟူ​သော ဆိုရိုးစကားလည်း ရှိ​ပေ၏။ ထိုနိုင်​ငံတကာသုံးဘာသာစကားသည်​ မြန်​မာနိုင်​ငံ၏ မိခင်​ဘာသာစကားအ​ပေါ် မင်းမူလွှမ်းမိုးလာ​နေပြီဖြစ်​သည်​။
မြန်​မာနိုင်​ငံတွင်​ မြန်​မာစာကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်​ ပြဌာန်းထား​သော်​လည်း အစိုးရရုံးဌာနများတွင်​သာ ရုံးမြန်​မာစာအသုံးကို ​တွေ့ရ​တော့သည်​။ များပြားလှ​​သော ပုဂ္ဂလိကရုံးများတွင်​မူ အင်္ဂလိပ်​ဘာသာဖြင့်​သာ ​ရေးသားကြသည်​။ ကိုယ်​​ရေးရာဇဝင်​ကအစ၊ အချင်းချင်းစာပို့​ခြင်းကအလယ်​၊ ​ကြေညာချက်​ကပ်​ခြင်းကအဆုံး အင်္ဂလိပ်​စာတစ်​မျိုးတည်းဖြင့်​သာ အသုံးပြုကြသည်​။ Business Letter ​ရေးနည်းများကို အပတ်​တကုတ်​​ ​လေ့လာ​နေကြ​သော်​လည်း ရုံးသုံးစာ​ရေးနည်းများကိုမူ မည်​သူမှမသိကြ​တော့​ပေ။ `Dear´ အစချီပြီး ​စာ​ရေးလျှင်​ သွက်​လက်​သ​လောက်​ `သို့´ ဟု အစချီလိုက်​လျှင်​မူ စာ​ချော​အောင်​​ရေးဖို့ကို အ​တော်​​လေးစဉ်းစားရသည်​။ သို့ဖြစ်​၍ မြန်​မာစာအသုံးသည်​ မြို့ပြ၏ ​နေ့စဉ်​လူမှုဘဝနှင့်​ ကင်းကွာ​နေခဲ့သည်​မှာ ကြာ​နေပြီဖြစ်​သည်​။
အ​ရေးတွင်​သာမဟုတ်​။ အ​ပြောစကားတွင်​လည်း အင်္ဂလိပ်​အသုံးအနှုန်းများ ကြားညှပ်​​ပြောခြင်းသည်​ တွင်​ကျယ်​လာခဲ့၏။ မြန်​မာမှုပြုရန်​မလွယ်​​သော အသုံးများကိုသာမကပဲ မြန်​မာစကားလုံးများကိုပင်​ အင်္ဂလိပ်​လို ဖလှယ်​​ပြောကြခြင်းပင်​ဖြစ်​သည်​။ `ထမင်းစားပြီးပြီလား´ ကို `lunch စားပြီးပြီလား´၊ `မိုးကာအင်္ကျီယူခဲ့ဦး´ ကို `raincoat ယူခဲ့ဦး´၊ `စားပွဲ​ပေါ်မှာ´ ကို ´table ​ပေါ်မှာ´ အစရှိသဖြင့်​ ​ပျော်​​ပျော်​ကြီး ​ပြော​နေကြသည်​။ ပိုဆိုးသည်​က ထိုသို့ အင်္ဂလိပ်​စကားလုံး ညှပ်​​ပြောရသည်​ကို ​ခေတ်​မီသည်​ဟု အထင်​​ရောက်​​နေကြခြင်းပင်​ ဖြစ်​သည်​။
အဆိုးဆုံးသည်​ကား မြန်​မာလူမျိုးအချင်းချင်းကိုပင်​ အင်္ဂလိပ်​လို စကားလာ​ပြော​သော မသိသားဆိုးဝါးသူများပင်​ ဖြစ်​သည်​။ နိုင်​ငံခြားဘာသာစကားဆိုသည်​မှာ ​ပြော​နေကျရှိမှသာ ​ပြောထွက်​သည်​၊ ​ပြောကျင့်​ဆိုကျင့်​ရှိ​နေမှ ရမည်​၊ အမြဲ​လေ့ကျင့်​​နေရန်​ လိုအပ်​သည်​မှာ မှန်​ပါ၏။ သို့​သော်​ အချင်းချင်း အ​ပြော​လေ့ကျင့်​ခြင်း မဟုတ်​ပါဘဲနှင့်​ ပဋိသန္တာရစကားများ၊ ​ပြောစရာရှိသည်​များကို မြန်​မာလိုမ​ပြောဘဲ အင်္ဂလိပ်လို လာ​ပြောခြင်းကို ရိုင်းသည်​ဟုသာ ဆိုချင်​ပါသည်​။ နိုင်​ငံခြားသားများနှင့်​ အဓိကဆက်​ဆံ​နေရ​သော လုပ်​ငန်းများတွင်​ လူတိုင်းနီးပါးသည်​ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်​ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်​သည်​မှာ မှန်​​သော်​လည်း မလိုအပ်​ပါဘဲ အင်္ဂလိပ်​လို ​တောက်​​လျှောက်​​ပြော​နေခြင်းမှာ မိခင်​ဘာသာစကားကို ​စော်​ကားရာ​ရောက်​ပါသည်​။ ​ဘေးကကြားရ​သော နိုင်​ငံခြားသားများက `သူက မြန်​မာမဟုတ်​ဘူးလား´ ဟု အ​မေးခံရခြင်းသည်​ ရှက်​ဖွယ်​လိလိသာဖြစ်​၏။
မြန်​မာစာကို မြန်​မာလူမျိုးမှ မ​ရေးလျှင်​ မည်​သူ​ရေးမည်​နည်း။ မြန်​မာစကားကို မြန်​မာလူမျိုးမှ မ​ပြောလျှင်​ မည်​သူ​ပြောမည်​နည်း။ `အင်္ဂလိပ်​လို​ပြော​နေကျမို့ အင်္ဂလိပ်​လို​ပြောရတာ ပိုအားသန်​တယ်​´ ဟုဆိုသူများ များပြားလာလျှင်​ မြန်​မာလူမျိုး ကွယ်​​ပျောက်​ရန်​သာ ရှိ​တော့သည်​။ သို့ဖြစ်​၍ နိုင်​ငံတကာနှင့်​ ရင်​​ပေါင်​တန်းနိုင်​ရန်​ ကြိုးစားသည်​နှင့်​အမျှ မိခင်​ဘာသာစကားအ​ပေါ် တန်​ဖိုးထားမှုများလည်း တိုးတက်​လာ​စေချင်​​ကြောင်း ဆန္ဒပြု​ရေးသားလိုက်​ရပါသည်​။ ။
Ma ma ga dawt
Myanmar sar Ko chit loon lot
Myanmar font ma ya tae phone mhar
Myanmar lo Pyaw chin loon lot
D lo In Ga Late sar lone Tway nae
Myanmar lo Yite pee Pyaw ya tar
Khwint Hloot par Naw..
Pyinnyar san dar lar mmg… heee hee.. myanglish nae post tin pa lite mae.. khi khi..
အောင်မယ်လေး ဒီစာတိုတိုလေးတောင် အတော်ဘာသာပြန် အသံပါပြန်နေရတာ ပိုစ့်ပါတင်မယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မယ်လေးဖုန်းဖိုးလေး ဂစ်ဂစ်ဂစ်။ အဲ့ဒါပေသိ စမ်းကျိကြပါလား စမ်းဖတ်ကျိချင်လို့
င်​ငံတကာနှင့်​ ရင်​​ပေါင်​တန်းနိုင်​ရန်​ ကြိုးစားသည်​နှင့်​အမျှ မိခင်​ဘာသာစကားအ​ပေါ် တန်​ဖိုးထားမှုများလည်း တိုးတက်​လာ​စေချင်​​ကြောင်း ဆန္ဒပြု​ရေးသားလိုက်​ရပါသည်​။ ။
ကျုပ်တို့ကတော့ အမ်ဘီဘီအက်စ် (Myanmar Buddhism Burmese Special ) ဆိုတော့
နိုင်းဗဂိုးဒါး ဒင်းနားပါတီ လို့ဘဲ ပြောပစ်လိုက်တယ် ဟွင်းဟွင်း
မြန်​မာ လိုဆဲမှ အရသာချိဒါ
နာ​ရောပဲ.. အညင်​ကတ်​လာရင်​ အဲ့​ကောင်​​တွေကို ​ရေးတဲ့စာ​ဘေးမှာ မြန်ဂလိလို ဆဲ​ပေးလိုက်​ချင်​တာ.. ဟိဟိ
ငိငိ.. မမကြီးကိုပေါတာလားဟင်.. မမကြီးက ဆမ်းတိုင်မ်းဆို အဲ့လိုထဖောက်တတ်တယ်.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရုံးစာတွေကို မြန်မာလိုရေးရရင် စိတ်ပါညစ်တာ.. အလုပ်က မေးလ်တွေဘာတွေဆို လိုတိုရှင်းပဲရေးလေ့ရှိတာ…ဟိုဖက်က ဘိုးတော်တွေလည်း အဲဒီအတိုင်း.. မေးလ်ရေးရင်.. Dear တောင်မထည့် နာမည်တပ်ပြီးရေးတာ… သိပ်ပြီးလည်း ဖွဲ့နွဲ့တာမရှိခဲ့.. တခါတလေများ မြန်မာလိုရေးဖို့ပေါ်လာလို့ကတော့ ဒေါင်းတောက်အောင်စဉ်းစားရတယ်.. မြန်မာစာမကျေခဲ့တာလည်းပါတာပေါ့.. အဲ့လိုဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်တတ်လားဆိုတော့လည်း ထူးမခြားနား..
ဟီ.. ဂယ်​​တော့ ကွကိုယ်​​ပြောတာ.. သများလည်း သို့ တပ်​ပြီးရင်​ ဘာ​ရေးရမှန်း မသိ​တော့ဘူး.. အခု ဒီစာကို အ​ရေးစကား​ပြေပုံစံ​ရေးတာ​တောင်​ စာ​ချော​အောင်​ မနည်းလုပ်​ထားရတာ
မြန်မာစာ ဆိုသည်ကို …
မြန်မာစာ ၏ အနှစ်သာရ ဆိုသည်ကို….
တံခါးပွင့်လာ၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံမှုများ ပိုမိုများပြားလာသဖြင့် နိုင်ငံတကာသုံး ဘာသာစကားကို အသုံးများသည်ကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။
သို့သော် အပေါ်တွင်ပြောခဲ့သလို ရုံးစာပင်လျှင် ဖြောင့်အောင်မရေးနိုင်တော့သော အဖြစ်မှာမူ မသိသား ဆိုးရွားလှပေသည်။
ကျနော်တို့ အားလုံး မြန်မာစာ သင်ခဲ့ရပါသည်။
ကျနော်တို့ အားလုံး မြန်မာစာ ရေးတတ်ပါသည်
အင်္ဂလိပ်စာ သင်စဉ်က essay/ letter ပုံစံ သင်ခဲ့ရသော်ငြား
မြန်မာစာတွင် ပေးစာကဏ္ဍ ပျောက်နေသလောဟု တွေးနေမိသည်။
ကျနော်တို့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်စဉ်က essay ရေးခဲ့ရဖူးသည်။
မြန်မာစာတွင် စာစီစာကုံး (ကူးခဲ့ကြဖူးသည်)
အင်္ဂလိပ်စာတွင် letter ရေးဖူးသည်
မြန်မာစာတွင် ပေးစာကို (တစ်ခေါက်သာ မြင်ဖူးသည်ထင်ပါ၏)
အင်္ဂလိပ်စာကို ပိုမိုလေ့လာရာတွင် စာအရေးအသားအတွက် essay ပုံစံတင်မက reporting ပုံစံပါ ထပ်မံလေ့လာရဖူးသည်။
တကယ့် တကယ် တွေးကြည့်မိသည်ကတော့
အင်္ဂလိပ်စာ သည်လည်း ဘာသာစကား ဖြစ်ပါသည်
မြန်မာစာ သည်လည်း ဘာသာစကား ဖြစ်ပါသည်
ဘာသာစကား ဆိုသည်ကို သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံအတော်များများ တူပါသည်။
ကျနော်တို့ အင်္ဂလိပ်စာလောက်နီးနီး မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို စနစ်တကျ မသင်ယူခဲ့ရ၍သာ ဟု… မြင်မိပါကြောင်း
(ကျနော် ဘာသာစကား ဆိုသည့် အချက်တစ်ခုတည်းကို ယှဉ်ကာ ချိန်ထိုးပြခြင်းဖြစ်ပါ၏
လွဲနေပါက ထောက်ပြဝေဖန်၊ လေကန်ကာ ဆဲနိုင်ကြပါကြောင်း )
ပညာ​ရေးဘက်​ လှည့်​မိမှာစိုးလို့ မနည်းနိဂုံးချုပ်​ထားရတာ.. နီလာ​ပြော​တော့ ​ပြောချင်​လာပီ ဟိဟိ..
မလွဲပါဘူးဟာ.. တက္ကသိုလ်​မှာတုန်းက ရုံးသုံးစာအ​ကြောင်း သင်​ရဖူးတယ်​.. တကယ်​မသုံးရ​တော့ ​မေ့ကုန်​​ရော… မြန်​မာစာဆို ကူး​ရေးတာနဲ့ အချိန်​ကုန်​တာ.. စနစ်​ စနစ်​..
သတိရလို့ ​ပြောလိုက်​ဦးမယ်​… မြန်​မာစာကို မြန်​မာလိုဖတ်​ပြီး နားမလည်​တာရှိတယ်​.. ဥပ​ဒေ​တွေပဲ.. သုံးခါ​လောက်​ဖတ်​တာ​တောင်​ ဘာဆိုလိုချင်​မှန်း မသိဘူး
မြန်မာစာ ကို မိုင်နာဘာသာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် မသင်မနေရ သင်ကြားကြရသည် မှန်ပါ၏
သို့သော် (ကျနော့်၏ လေ့လာမှု အားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်)
ရုံးသုံးစာကို သင်ကြားပေးခဲ့ခြင်း မတွေ့ခဲ့ပါ။ (မဆိုင်၍ဟု ယူဆထားကြသည်ထင်ပါသည်)
မြန်မာစာ သင်ရိုးများကို အနည်းငယ် လေ့လာကြည့်သောအခါ
မညံ့ပါ ဟု တွေးမိပါသည်။
စနစ်က ညံ့ခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ ပေးသည်ကိုပင် ကုန်စင်အောင် မယူနိုင်သော “လူ” တွေကြောင့်သာ ပိုညံ့သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ဥပဒေများကို နားမလည်ခြင်းမှာ ရုံးသုံးစာနှင့် အလှမ်းကွာခြင်းသည်လည်း တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆမိပါ၏ )
လော (ဥပဒေက တော့ မြန်မာလို ရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ နားမလည်တာ)
ဘာကို ဆိုလို မှန်းကိုမသိတာ။
ဆိုပြီး မြန်မာစာဘဲ ပြောနေ ရေးနေ တတ်နေ လေ့လာနေ ရုံမျှနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလေ
ကမ္ဘာကြီးကပြားနေပြီ ကမ္ဘာရွာဖြစ်နေပြီ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ ကူးလူးဆက်ဆံသွားလာနေကြ တဲ့ထဲ မြန်မာလိုဘဲ ပြောလို့မှမရလေတော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မှ ကမ္ဘာပတ်ရမှာမို့ အင်္ဂလိပ်စာထူးချွန်တတ်မြောက်တဲ့ကလေး ကြီးလာရင် ပိုလို့တောင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတာပါဘဲဗျာ။ (ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်)
အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာ မဖြစ်မနေတတ်သင့်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲ သုံးတာ မဟုတ်ဘဲ.. တစ်ချိန်လုံး အင်္ဂလိပ်လို ပြောချင်နေတာတွေကို မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြောတာပါ..
လုံမလေးရဲ့ ဒီအဆိုကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။
ကိုခင်ခပြောသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ သားတော်မောင် ကို မြန်မာစာ အသေအလဲသင်ပေးထားရတာ ဒါပေမဲ့ သဒါ သင်လို့မရသေး
ညီမတော်လေးရဲ့ .. စေတနာနဲ့ ကောင်းစေလိုတဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို..အထင်းသားကြီးတွေ့ မြင်ရပေသည်…ညီမတော်..
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ဤစာကို color note ထဲတွင် ရိုက်ပြီး ရေးရသည်မှာ နှစ်ရက်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်..
အားပေးမှုကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည် အစ်ကိုတော်.
ကြော်ငြာ ၀င် လိုက်ပါအုံးမယ်
တိုက်တိုက် ဆိုင် ဆိုင် ကျ နော် ကလဲ ရေး လို့ မပြီး သေး တဲ့ ပိုစ်မှာ ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ်။
(အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘာလုပ်လုပ်စနစ်တကျ လုပ်လာကြပါတယ်။
“နုတ်တစ်ရာစာတစ်လုံး” ဆိုတဲ့ အတိုင်း စာနဲ့ပေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီး
Mart ဖွင့်တဲ့အခါမှာ တော့ပိုပြီး တိ ကျ လာ ကြ ပါတယ်။
သူတို့ ဆီ ကို ပစ္စည်းသွင်းမယ့် supplier တွေက
အရင်လို ပိုင်ရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက် စကားပြောခွင့် မရတော့ပါဘူး။
buyer နဲ့သာ စကားပြောရ ပါတော့ တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု mart မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်
ပ ထမ ဆုံး ပစ္စည်းနမူနာ ကို buyer ကိုပြ။
နောက်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ စာရွက်ပေါ်မှာအချက်အလက်တွေဖြည့်ရပါတယ်။
ဒီလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ဖြည့် သာဖြည့်ရတယ် ကိုယ်တိုင်လဲ လုံး စေ့ပတ်စေ့ နားမလည်သူများပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ရေးလိုက်ရင် နိုင်ငံ တကာ အဆင့် မီသွားပြီလို့ ထင် နေကြ သလားတော့မသိ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုံးသုံးဘာသာ စကား က မြန်မာစာပါ။
ဒါပေမယ့် ရုံးဌာနတွေ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ဖောင်တွေဘာတွေဖြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်နေရတုံးပါဘဲ။
ဒီစာရွက်တွေကို အသုံးပြု ပြီးဖြည့် ခိုင်း တဲ့ သူ ကိုယ်တိုင်လဲ ရေရေရာရာမသိကြတာများပါတယ်။
ကြက်တူရွေးစာအံသလို ဟိုအကွက်ဟိုလိုဖြည့် ဒီအကွက်ဒီလိုဖြည့် ဆိုတာတွေဘဲများပါတယ်။
ပါးစပ်ကသာ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေနဲ့ပြောနေပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီစကားလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပါယ်
ကိုရေရေ ရာရာ မသိ။
ဒါကတော့ Mart ကို ပစ္စည်း သွင်းတော့ မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကြုံရတာပါဘဲ။)
လုံ မလေး ရေ ဒီပိုစ်ကို သဘောကျတယ်ဗျိုး
လေးပေါက်ကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး ဖြည့်ပြောချင်တာလေး သတိရမိတယ်..
ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လို အညွှန်းတွေရေးတဲ့ကိစ္စ…
ပြည်တွင်းမှာထုတ်တယ်.. နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့မှာမဟုတ်ဘူး..
ပြည်တွင်းကလူတွေ သုံးတယ်.. အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတဲ့ (လုံးဝတောင် မတတ်ကြတဲ့) ကျေးလက်ကလူတွေ သုံးတယ်.. (မြန်မာအိမ်သုံးဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ စသဖြင့်)
အဲ့ဒါကို အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ရေးထားကြတယ်… ဘာသဘောလဲတော့ မသိဘူး.. ခေတ်မီမယ်ထင်လို့ လုပ်တာလား .. ဘာလား..ညာလားပေါ့..
ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် လေးလေး..
အလုပ်လျှောက်ရင်တောင် အင်္ဂလိပ်လို အရေးအပြောရမှ ခန့်တာလေ ကန်ပနီအားလုံးက နိုင်ငံခြားဖက်စပ်တွေဖြစ်ကုန်တာလေ အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ရင် တရုတ်လိုတတ်ရမယ်လေ
အင်္ဂလိပ်လို ပြောကြရေးကြသလို မြန်မာလိုလည်း လိပ်ပတ်လည်အောင် ပြောတတ်ရေးတတ်စေချင်တာပါ.. ယောက်ခမရေ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေကြတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ.
တဂျီးက အိုင်ကွန်တွေ ပြောင်းထားလို့။
ဒီပုံ တွေ အတိုင်း ဆို …..
:hint: ကနေ :အေ: ဖြစ်သွားပြီး
ကနေ :ကေ: ဖြစ်သွားတာ။
ပြီးတော့ အကုန်လဲ မရသေးဘူး
(P.S ဒီပုံတွေကို ပြောင်းချင်စိတ် မရှိသေးဘူးလားဟင်)
(မြန်မာစာပို့စ် ဆိုတော့ စာပို့တဲ့ပုံစံနဲ့ ပြောကြည့်ဦးမှ)
ယခု ပြသသောပုံမှာ အရွယ်အစား အနည်းငယ် သေးနေပါသဖြင့် ပုံနှင့်စာကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမမြင်ရပါ။
ရုပ်ပြောင်အားလုံးကိုလည်း စာရိုက်ရန်သင်္ကေတ မထည့်ရသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ယခု ရုပ်ပြောင်များမှာ အနည်းငယ် ရိုးအီလာဟန် ရှိသောကြောင့် ပြောင်းရန် အစီအစဉ် ရှိမရှိကိုလည်း သိလိုပါသည်။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစ တော့ လုပ်လိုက်ပါကွီ
တန်ဖိုးကတော့ အမြဲထားတယ်။ အခုအင်္ဂလိပ်စကားတောင် မနည်းသင်နေတာဆိုတော့လေ အဟိ
မြန်မာဆိုတော့ တို့က မြန်မာစာကို ပိုနှစ်သက်တာပေါ့။
မြန်မာမှု မြန်မာဟန်တော့ နောင်တစ်ခေတ်လူငယ်တိုင်း တန်ဖိုးထားတတ်အောင် ရှေးလူကြီးတွေ သင်ပြစေချင်မိပါတယ်။
ပန်းချီဆရာကြီး ကြေငြာကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်။
မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာလက်ဖက်ရည်ကို ကြိုက်တာပေါ့ဆိုတာကိုလေ….
မြန်မာက မြန်မာပါပဲ မမရေ..
ခေတ္တမန်းဂဇက်မြို့ ရက်စွဲ။ ၂၀၁၄ခုနှစ်သြဂုတ်လ(၅)ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ ထောက်ခံပါကြောင်းအကြောင်းကြောင်းခြင်းကိစ္စ။
ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ လုံလုံ၏ ၄၊ ၈၊ ၂၀၁၄ နေ့စွဲပါ http://myanmargazette.net/201951 စာ
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာအား ဖတ်ရှုကြည့်ရာတွင် လူအများ
ဖတ်ရှုသင့်သည့် စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည့်အတွက် ထောက်ခံမိပါကြောင်းနှင့် နောင်ကိုလည်း
ချစ်သူ လေးဒေါင့်တုံးနာချည်း ကပ်မနေပဲ ဤကဲ့သို့ အကျိုးပြု စာများရေးသားသွားဖို့ကြိုးစားစေလိုကြောင်း
ကွန်မန့်တင်လိုက်တော့စာပုံစံ နဲနဲပျက်သွားကြောင်း သတိပြုပါလေ( ဤကားသဂျီးဆိုဒ်၏အလိုတည်း)
ကွန်မန့်ကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဘီစီပေးထားပါကြောင်း..
စကားအတင်းစပ် မျောစာတွဲ ဆိုတာ ဘာလဲဟင်င်..
မျှောစာတွဲဆိုတာက ဋ္ဌာနကြီးတစ်ခုအောက်မှာရှိသမျှ ဋ္ဌာနခွဲတွေက ထုတ်သမျှရုံးစာတွေကို မိတ္တူတစ်စောင်စီ
မှတ်တမ်းထိန်းခန်းမှာတွဲထားဖို့ပို့ရတာ…..အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ဖေါင်ကြီး ဗဟိုလ်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကျောင်းတက်ရင် ရုံးစာရေးနည်းတွေ၊ လက်နှိပ်စက်ရိုက်နည်းတွေ ..စတဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းအတတ်ကိုသင်ကြရတယ်….
ကဆုန်လ=ရေပြတ်သောလ – ထို့ကြောင့် ညောင်ရေသွန်းပေးခြင်းများပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဝါခေါင်… ဝါတွင်း(၃)လရဲ့ အလယ်လ။ ကျောက်စာတွေမှာတော့ နံကာ တဲ့။ နံဆိုတာ အချိန်ကာလ။ ကာ က လယ်ယာလုပ်ငန်းဆိုတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့လလို့ ဆိုလိုတာပဲ။မိုးတွေဖြိုင်ဖြိုင်ရွာတဲ့လမို့လယ်သမားကြီးတွေလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြပါတယ်။
Credit to ရဲသျှမ်း
မြန်မာစာ သည် ဒို့စာ ….။
ဘယ်အခါ မဆို အစွန်းရောက်လွန်းရင် ကောင်းဘူးပေါ့ဂျာ …
ကကြီးမိုက် ပြောသလိုဘဲ အတော်လေး ကောင်းတဲ့ စာလေးပါ။
ဝေဖန်လေကန် ရရင်တော့ တစ်ချို့အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်း တွေ ကို မြန်မာလို ပြန်ဖို့ မကောင်းတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
အနီးဆုံး ဥပမာ ကတော့ ကွန်ပျူတာ – စက်ဦးဏှောက် ဆိုလား။
Software – အပျော့ထည်
Hardware – အမာထည် စသဖြင့် ပါ။
အရီး အရင်က အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်တုန်း User Manual ရေးဖူးပါတယ်။
အများ ဖတ်လို့ နားလည်အောင် မြန်မာလိုပေါ့။
အဲဒီ သုံးနေကျ ယဉ်ပါးနေတဲ့ အေလီယန်စာလုံး တွေ ကို မြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ အတော့ကို ကသိကအောက် နဲ့ လူတွေ နားမလည် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ မူရင်း က လိုရင်းတိုရှင်းလေး။ ဒါကို မြန်မာလို ပြန်မှ ရှည်ပြီး ရှုပ်ကုန်တော့ နှစ်ခု ညှပ် ရေးမှ ဘဲ အတော်လေး ဖတ်ပျော် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရှင်လေး ရဲ့ မောင်တော် ပြောသလို အလယ်အလတ်လေးပေါ့။ :-)))
ဖြစ်နိုင်သမျှ တော့ မြန်မာပြည် သုံး အတွက် မြန်မာလို ရေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
မြန်မာပြည် က မြန်မာပြည်သူတွေသာ စားဖို့ အရည်အချင်းသာ ရှိတဲ့ ပုန်းရည်ကြီး ထုတ် တွေ ရဲ့ စားသုံးရန် အညွှန်းမှာ အင်္ဂလိပ် စာ အမှား တွေ နဲ့ လျှောက်ရေးထားပြီး စားတော့ သဲတရှပ်ရှပ် နဲ့ အားလုံး ပစ် လိုက်ရပါတယ်။
လိုတာ ကို ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး မလိုတာ အရေးမပါရာ မှာ မယောင်ရာ ဆီမလူး ဖို့ သတိလေး တွေ ထားသင့် သလားပါဘဲ။
ရုံးစာ ကလဲ အရီးတို့ တုန်း က ပထမနှစ် လား ဒုတိယနှစ်လား မြန်မာစာမှာ ရုံးစာ ရေးနည်း ပုံစံ သင်ရပါတယ်။
အခုလဲ အစိုးရ ရုံးတွေ မှာ သုံးဆဲပါ။
မြန်မာလို မသုံး၊ မရေး၊ မပြော လို့ မြန်မာစာ ကို တန်ဖိုး မထားဘူး လို့ ပြောလို့ မရဘူး ထင်ရဲ့။
တိုက်ရိုက် တော့မဆိုင် ပေမဲ့ သွယ်ဝိုက် တွေးနိုင်မလားလို့။
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ မဟုတ် တဲ့ သမိုင်းသုတေသီ တွေ အရမ်း တန်ဖိုးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှိခိုးချင်မှ ရှိခိုး မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတစ်ယောက် ဘုရားပေါ်မှာ အကျယ်ကြီး ဘုရားရှိခိုးပြီး ရွှေခိုးရောင်း နေ တာ။
ဘယ်သူ က တန်ဖိုးထား တယ် ခေါ်မလဲ။
အစိုးရရုံး​တွေမှာ ဗမာလိုသုံးတယ်​ ဟုတ်​ စ ။ ဘဏ်​​တွေမှာ အီးလိုပဲ​ရေးတယ်​ ။ ရုံးစာ​တွေမှာလဲ အီးလို ညှပ်​သုံးတာပဲ ။ ​ဘောင်​ချာ​ဒွေ စာရင်းစာအုပ်​​တွေ မလဲ အီးလိုချည့်​ပါဘဲ ။ ကြာ​တော့ ဗမာလို ၁ ၂ ၃ ၄ ​တောင်​ မ​ရေးတတ်​​တော့ဘူး ။ Dr တို့ Cr တို့ Transfer တို့ Cash တို့ A/C ( Account) တို့ ဗမာလို သုံး​တော့ပါဘူး ။ အဲ့လာ​တွေက ဗမာမှုပြုပြီးသား ​တွေ​တော့ရှိသား ။ Debit (Dr) မြီစား Credit Cr မြီရှင်​ Transfer စာရင်း​ပြောင်း cash ​ငွေသား ဒါ​ပေမဲ့ သုံး​တော့ပါဘူး ။ အီးလို ​ပြောရတာပဲ အရသာ​တွေတယ်​ဂျ ။